Weerarkii ugu khasaaraha badnaa oo Turkiga loogu gaytsay Afrin – Radio Daljir
Weerarkii ugu khasaaraha badnaa oo Turkiga loogu gaytsay Afrin
Febraayo 4, 2018 7:58 b 0
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay khaasarihii ugu waynaa inuu kasoo gaaray waqooyiga Suuriya, tan iyo markii ay qaaday howlgalka ay ku beegsanayso dagaalamayaasha Kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya ku sugan.
Sideed ka mid ah ciidamada dowladda Turkiga ayaa lagu dilay howlgalka Turkiga ee uu ka wado Afrin ee ka dhan ah YPG, sidaasi waxaa lagu sheegay qoraal kasoo baxay ciidamada Turkiga.
Dagaalamayaasha Kurdiga ee YPG ayaa beegsaday ciidamo Turkish ah oo la socday taangi, iyagoo ku sugan deegaanka Sheikh Haruz ee waqooyiga Afrin, waxaana halkaasi ku geeriyooday shan askari, sadex kalle ayaana lagu dagaal kadhacay Afrin.
Raysal wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa balanqaaday inay u aargudayaan qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka.
“Waxa ay nu bixinay si degdeg ah jawaab, waana sii wadi doonaa” ayuu yiri Yildirim.
Ciidamada cirka ee Turkiga ayaa wada duqayn cirka ah oo ay ku beegsanayaan YPG saldhigyada ay leeyihiin iyo goobaha kaydka u ah hubka.
Wasiirada ganacsiga DFS iyo dowlad goboleedyada oo kulmay